Maalinta: Abriil 2, 2018
Dawlada Hoose ee Magaalada Adana waxay abaabushay xaflad muusig oo ka dhacday Adana Subway ee 2 April Bisha Ogaanshaha Autism World World oo ay weheliyeen mutadawiciin aasaasi ah Tababbarka iyo Ilaalinta Caruurta Naafada ah ee Naafada ah (ZİÇEV). 1-5 is dhexgalka bulshada ee carruurta da'doodu u dhaxayso [More ...]
Qorshee Maalgashiga Gaadiidka aan kala go 'lahayn ee Kayseri
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Mustafa Celik, Kayseri, oo waxay sameyn doonaan taraafiko aan kala go 'lahayn oo isgoys joogta ah, waxay yiraahdeen waxay dhigayaan rikoor. Madaxweyne Celik, Kocasinan iyo Mustafa Kemal Pasha Boulevard [More ...]
Dayactirka Baabuurta Kabaha Baabuurta Buuxsan Loo Furay
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay dhameystirtay dayactir iyo howlo hagaajin xilli xilli ah oo kuyaala Balçova Cable Car Facilities halkaas oo 1.2 milyan oo rakaab ah la geeyay ilaa maalintii la furay. Muuqaalka xarunta ayaa dib loo furi doonaa berrito waxaana dib loo cusbooneysiin doonaa iswada iyo nidaamyada korontada. [More ...]
Mashruuca Daraasada Erzurum Tram Line iyo Adeegyada injineerka Natiijada Sheegashada
Saldhigga Tareenka Erzurum - Xarunta Atatürk University - Kuliyadda Caafimaadka - Tababbarka Gobolka iyo Isbitaalka Cilmi baarista - Cisbitaalada Magaalada - Yavuz Sultan Selim Boulevard - Xarunta Tareenka [More ...]
Guddoomiyaha Guddiga Kardemir Öz 81. Farriinta sannadlaha ah
Kardemir Inc. Farmer Faruk Öz, Gudoomiyaha Gudida Agaasimeyaasha ee Kardemir. xuska sanad guurada aasaaska. Ömer Faruk Farriintiisa gaarka ah, mararka qaar sawir, sawir yar ama sharooto [More ...]
Isku-duwayaasha TCDD ayaa isku wada jira iyaga oo waxbarashada wada
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) 's saddex hoosaad TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ iyo habeeyay group 4 for Salaamaha shaqaalaha TÜVASAŞ, yeerista iyo Xeerarka Protocol, Stress Management, Tabaha ku ool ah Communication, dhiirogelin Employee [More ...]
Tikidhada madaarka ee Ankara ayaa ku soo laabtay caadi?
Duqa magaalada Mustafa Tuna, oo ka warbixiyay shilka shil ka dhacay shil ka dhacay labo tareen inta lagu gudajiray duulimaadkii Ankara ee maalintii hore, ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in shilku dhacay subaxnimadii Sabtida. [More ...]
Faransiiska gudaheeda, shaqaalaha shirkadda gaadiidka tareenka ee SNCF 3 waxay bilaabaan howlahooda shaqo joojin joojin ah Isniinta. Saraakiisha maamulka, 3 Abriil Talaadada, 77% ee farsamayaqaannada ayaa kaqeybqaadi doona shaqo joojinta iyaga oo cadeynaya taraafikadaas [More ...]
Waxyaabaha muhiimka u ah Tramway ilaa Trabzon MMO
Rugta Trabzon Rugta injineerinka mashiinka Saban Bulbul, Trabzon, waxaa loo qorsheeyay in loo sameeyo Nidaamka Rail Light 61saat'e laga helay hadalo xasaasi ah. Bülbül wuxuu aadayaa Yavuz Selim Boulevard kana yimid Akyazı iyo Değirmendere wuxuuna aadayaa jaamacada [More ...]
116 Cusub ee Baska ee Gaadiidka ee Antalya
Antalya Metropolitan Municipal 1 waxay ku bilaabatay marxalad cusub safarka dadweynaha Abriil Axad X Sida waafaqsan baahida shacabka, basaska cusub ee 116 waxaa lagu soo daray nidaamka gaadiidka dadweynaha. Sidaa darteed, inta jeer ee safarada ayaa kordha, [More ...]
KAYBIS Nidaamka 1 ee la bilaabay Abriil
Nidaamka KAYBIS 1 waxaa loo adeegsaday ilaa bishii Abriil: Kayseri Transportation Inc. ee ku taal Degmadda Kayseri. Nidaamka Wadaagidda Nidaamka Baaskiilka ee 'Smart Bike' 'waa isku mid sanad walba. [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada İzmir, oo dhistay gawaadhi bas oo koronto oo buuxa oo ah gawaarida 20, waxay siisaa korantada looga baahan yahay gawaaridaas warshadda tamarta qorraxda ee ay ku rakibtay ESHOT saqafka waxbarasho. Waxaa soo saarey warshadda oo bilaabatey in ay shaqeyso bishii Agoosto [More ...]
RayHaber 02.04.2018 Warbixinta Shirka
Muuqaal dulsaarasho iyo tikitka tikitka rakaabka ee loo yaqaan 'YHT' ayaa daabacaya calaamad muujinaysa Console Signal Console Waa Lagu Sameyn doonaa Adeegga Shaqaalaha waxaa lagu heli doonaa Shayga Cuntada Cuntada waa la helayaa
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri, “Sarıkamış waa goob naadir ah oo naadir ah qaab dhismeedkiisuna ku siinayo raaxo dhalaalaysa gobolka iyo geedaha firfircoon oo leh heerkulka tayada barafka. [More ...]